Akhri:-Khudbaddii Madaxweynaha Uu Maanta Ka Jeediyey Furitaankii Kalfadhiga 1-aad Ee Golaha Shacabka
Wednesday March 01, 2017 - 21:14:06 in Wararka by Xafiiska Muqdisho
Guddoomiyaha golaha shacabka - Mudane: Mohamed Sh. Cusmaan Jawaari iyo Ku Xigeennadiisa Xubnaha Golaha Shacabka.
Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa haweenka Soomaaliyeed oo maanta qayb weyn ka ah baarlamaanka labada gole, go'aanka taariikhiga ahna qayb ka ahaa, sidoo kalana aan ka rajaynayo xukuumadda Raysal wasaare Xassan Cali Kheyre ay kaalintooda ka helaan.
Bulshada Soomaaliyeed ee dibad iyo gudahaba u dabbaal degtay go'aankii xildhibaannadoodu gaareen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin.
Waxaanuna maanta halkan idiinka ballaan qaadaynaa aniga iyo xildhibaannada Soomaaliyeed in aanu ka dhabayn doonno intii awooddayada ah ballamihii aanu idiin qaadnay xilligii aanu doorashada ku jirney aniga iyo iyaguba.
Aniga oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sida dhaw ah ula socday hawlaha Baarlamaanka 9aad, waxaan qirayaa in uu wakhti badan kaga lumay khalkhal siyaasadeed oo joogto noqday oo haday ugu yartahay sanad ka cunay wakhtigii shaqo ee Baarlamaanka.
In wal oo aanay Dalka iyo Dadka dani ugu jirin isqabqabsi siyaasadeed hadan waxaan mar labaad ku amaanayaa hogaanka Baarlamaanka in ay dhameeyeen iyada oo aan shisheeye soo faragashan.
3. Matalaadda Dadweynaha - waa laf dhabarta Dimoqraadiyadda sidaa awgeed waa in aan dardar galino dhamaystirka Matalaadda Dadweynaha.
Ila hada waxaa la ansaxiyey kaliya Sahrciga Axsaabta laakiin wixii shuruuc ah ee la xiriira sharcigan wali lama taaban.
Waxaa ka mid ah Sharciga doorashadda, Diiwaangalinta dadweynaha, sharciga Jinsiyadda IWM.
Waxaan garan karaa in hawlaha aan soo sheegey ay u baahanyihiin dhaqaale xoog ah oo ku bixi doona khubaro, tababaro, dhageysi dadweyne iyo wlm.
Waxaan idiin balanqaadayaa in aan wixii dhaqaale ah ee aan awoodna aan marnaba la idinka hakranayn oo intii aan kari karno aan idinla garb joogi doono.
Waxa kale oo aan la socdaa duruufaha dhaqaale ee idin haya maadaama idinka iyo xaasaskiinii aad kala dagantihiin.
Waxaan idiin ballan qaadayaa in aan wax badan ka bedelno nolosha iyo nabadgelyada xubnaha baarlamaanka,.
Waxaana ku doortay kartidiisa iyo aqoonta maamul iyo hoggaamineed ee uu leeyahay Ray'sul wasaare Xassan Kheyre, waxaan tixgelin siiyey khibradda uu u leeyahay shaqadan.
Waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqo in ay taageeraan walaalahooda tabaalaysan iyo kuwa dan yarta gaar ahaan dadka abaaruhu halakeeyeen.
Sidoo kale waxaan ganacsatada mid wax weyn haysta iyo mid wax yar haystaba ka codsanayaa in ay maciishadda u jebiyaan oo faa'iidadii ay heli lahaayeen qayb uga tanaasulaan walaalahooda tabaalaysan.
Waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan dagaalada sokeeye ee dalka ka socda gaar ahaan kuwa dhowaan ka soo cusboonaaday deegaannada Cadale iyo Marka.